Chile " Journey-Assist - Fampahalalana mahasoa. Ilay vola. Climate. mahaliana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Amerika Atsimo » Shily
Chile. Fampahalalana ankapobeny
Chili ho an'ny fizahan-tany
Santiago. Renivohitr'i Chili
Azo antoka ny voakasik'i Silia amin'ny firenena mahaliana indrindra eto an-tany. Manintona mpizahatany miaraka amin'ny tantaran'ny taon-taonany, tendrombohitra avo be izy io, tany mahafinaritra, faritra be tendrombohitra, zavaboary mahatalanjona, olona maro be eo an-toerana ary manana toekarena haingana be. Avy amin'ny tany voajanahary ny zavatra tena fanta-daza eto amin'ity firenena ity. Anisan'izany, indrindra ny volkano Parinakota, farihy Chungara ary Miskanti, ny tany efitra Atacama, Nosy Paska.
Nosy Paska any Chili
Inona no tokony hatao any Chili
Any Chile, ny mpizahatany tsirairay dia hahita zavatra hatao. Eto ianao dia afaka milomano amin'ny fahavaratra, mandinika ny Nosy Paska amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona, manandrana divay mahavariana ary mahazo fomba fijery mahafinaritra. Ankoatr'izay, ny firenena dia manana fotoana mety tsara amin'ny fitsangatsanganana sy ny firoboroboana. Ireo trano fandraisam-bahiny Shiliana dia mirehareha trano fandraisam-bahiny sy mahafinaritra ary serivisy kalitao (amin'io lafiny io, mahery noho ny firenena amerikanina Latinina i Chile).
Portillo. Ski fomba fivarotana any Chili
Ankoatr'izay, ity firenena ity dia azo alain-tahaka indrindra hitsidika ny volana Jona ka hatramin'ny Oktobra. Manana vanim-potoana ambany i Eoropa amin'izao fotoana izao.
Toetr'andro any Chili
Ny faritr'i Chile dia ahitana ny endrika marika lava be, noho izany dia manana toetrandro isan-karazany. Ny antony mampisy izao fahasamihafana izao dia ny mampiavaka ny toeran'ny firenena amin'ny fifandraisana amin'ny zona tsindry avo, ary koa ny fitarihan'ny ranomasina sy ny fisian'ny fisiam-bahoaka. Noho ny maha-akaiky ny ranomasina, ny toetrandro any Mediterane no manjaka eto. Izy io dia aseho amin'ny hafanana antonony ary fefy lehibe eo anelanelan'ny avo indrindra amin'ny alina ambany sy ambany indrindra amin'ny alina. Mitroka any atsimon'ny firenena ny hamandoana avo, be ny rotsakorana be dia be ary ambany ny antonony amin'ny antonony. Any avaratr'i Chili, ny karazana toetr'orona any an-efitra dia manjaka, amin'ny andro mafana sy ny hatsiaka amin'ny alina.
Inona no atahory any Chili?
Raha ny vinavina sasany dia i Chile no firenena manana ny taha ambany indrindra amin'ny asa ratsy sy kolikoly any Amerika atsimo. Ka ity firenena ity dia azo antsoina hoe azo antoka. Na izany aza, tsy fahita eto koa ny halatra sy hosoka. Mihanaka koa ny fanondranana zava-mahadomelina. Tsy ilaina ny manao firavaka lafo vidy sy vola be any amin'ny toerana be olona. Amin'ny ankapobeny dia tsara kokoa ny tsy aseho amin'ny endrika ivelany rehetra (ohatra, amin'ny fitondrana valizy na fakan-tsary) fa mpizahatany ianao.
Ny tena tsy tokony hatao any Shily
Ny olana ara-politika dia tsy tokony hiadian-kevitra miaraka amin'ny Shiliana, indrindra ny fitondrana Pinochet sy fanavaozana ao amin'ity firenena ity. Mazava ho azy fa tsy olana lehibe izany, fa ny ankamaroan'ny Shiliana dia tena liana tanteraka amin'ny politika, ary hafa tanteraka ny hevitry ny mponina samihafa eto amin'ity firenena ity amin'ny resaka politika, ka ny resaka momba ny lohahevitra toy izany dia mety hivoatra amin'ny fifanakalozan-kevitra ara-pihetseham-po maharitra mandritra ny ora maromaro. Ho fanohanana ny toerany dia hisarika ny mpanohana vaovao bebe kokoa ny mpandray anjara tsirairay amin'ny fifanolanana, ka amin'ny farany dia mivoaka ny fivoriana iray.
CLP. Peso Shiliana. Fifanakalozana fifanakalozana any Chili. Bank sy ATM.
Ny vola nasionaly Chili dia Peso Shiliana. Ny kaody iraisam-pirenena dia CLP. Ny peso 1 dia zaraina ho 100 centavos ara-dalàna, fa raha ny tena izy dia tsy ampiasaina intsony ny centavos.
Peso Shiliana (CLP)
Amin'ny fizarana ankehitriny dia misy volafotsy amin'ny antokom-pianarana 1, 000, 2, 000 ary 5 000 pesos sy vola madinika anaram-boninahitra ny 10, 000, 20, 000, 1 ary 5 pesos. Ao amin'ny toeram-pivarotana sy orinasa indostrian'ny serivisy maro dia ekena koa ny dolara amerikana.
Ny ankamaroan'ny banky dia misokatra amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny 9 a.m ka hatramin'ny 14 p.m. Ny fifanakalozana fifanakalozana dia misokatra amin'ny 9 ka hatramin'ny 19 ora, matetika tsy misy andro tsy iasana. Ho fanampin'ny banky sy ny fifanakalozana, azo atao ihany koa ny fifanakalozana any amin'ny mpivarotra vola eny an-dalambe, na izany aza safidy io dia tsy andeha atao. Manolotra lenta mahasoa kokoa ry zareo saingy matetika dia mampiasa fomba hosoka amin'ny fifanakalozana.
Amin'ny fivarotana lehibe sy trano fisakafoanana lehibe rehetra any Chili, azonao atao ny mandoa vola sy serivisy amin'ny alàlan'ny carte de crédit. Ny fifanakalozana fahazoan-dàlana amin'ny mpandehandeha dia azo atao amin'ny banky (fa ny departemanta izay manome io mpanompo io dia misokatra matetika amin'ny 12 ora antoandro) ary any amin'ny birao fifanakalozana (any no tena mahasoa kokoa ny fampianarana). Mba hialana amin'ny vidin-fifanakalozana fanampiny dia tsara kokoa ny mandray ireo taratasim-bola any US dolara. Any amin'ireo tanàna kely sy vohitra kely dia tsy azo atao na aiza na aiza ny fandoavam-bola miaraka amin'ny karatra.
Ireo ATM eto amin'ity firenena ity dia misy na aiza na aiza, afa-tsy amin'ireo faritra avo tendrombohitra. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana torolàlana amin'ny fitaratra amin'ny teny anglisy.
Ny dolara sy ny vola hafa any Chili (Peso Shinoa ny tahan'ny fifanakalozana)
Fiantsenana any Chili. Inona no hividy?
Firenena tsara hiantsenana i Chile. Misy ivon-toeram-pivarotana lehibe, bazary miloko ary fivarotana fahatsiarovana. Ny ankamaroan'ny fivarotana dia misokatra manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 21 hariva. Iray amin'ireo toeram-pivarotana lehibe indrindra any Silia ny Parque Arauco, izay misy ao an-drenivohitra Shiliana Santiago. Manolotra fitafiana misy marika sy entana ao an-trano izy io. Ao amin'ity toeram-pivarotana lehibe ity ihany koa dia misy sinema marobe, lakandranon-dranomandry, bowling ary trano fisakafoanana maromaro miaraka amina mozika mivantana. Trano fivarotana lehibe hafa antsoina hoe "Alto Las Condes". Ahitana fivarotana marika Adidas, Lush, Converse, sns, ary koa cafe sy trano fisakafoanana marobe - Starbucks, Havanna sy ny maro hafa. Ny ivontoerana fiantsenana sy fialamboly Mallplaza dia misy any amin'ny tanànan'ny 17 Chili - Tobalaba, Alameda, La Serena, sns. Ity tambajotra ity dia noforonina tamin'ny taona 1990. Ireo toeram-pivarotana dia manana kafe mahafinaritra sy fivarotana marika an-jatony.
Manana tsena marobe koa i Chile izay manome voankazo, legioma, fahatsiarovana, akanjo (ao anatin'izany ny volon'ondry alpaca) eo an-toerana. Misy tsena fivarotana lehibe lehibe any Santiago antsoina hoe "Tsena afovoany La Vega". Izy io dia manomboka amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 19.30 hariva. Ity bazaar ity dia efa nisy 100 taona farafaharatsiny, ary ny trano maoderina dia natsangana tamin'ny 1985. Manolotra karazana legioma sy voankazo betsaka avy any Silia sy ireo firenena manodidina azy, ary koa hena sy vokatra hafa. Misy ihany koa ny kafe kely eny an-tsena manolotra pizza sy lovia malaza hafa. Be dia be ity bazary ity, mila mitandrina amin'ny mpangarom-paosy ianao.
Ao Pucon, ny tsenan'i Artesanal dia mendrika ny hojerena, izay ahitanao akanjo volonondry avo lenta sy fahatsiarovana vita tanana. Ao an-tanànan'ny Valparaiso dia misy tsena mitafo hafa antsoina hoe Cardonal. Napetraka ao amin'ny tranobe mirakotra lehibe feno 100 taona mahery koa izy io. Betsaka ny legioma, voankazo ary trondro.
Misy tsena parasy any Santiago antsoina hoe "El Persa Bío-Bío". Eto ianao dia afaka mahita souvenir, fanaka, boky, kosmetika ary fahagola maro karazana. Ao amin'ny faritaniny dia misy ny cafe Bío sy ny trano fisakafoanana Piscis Australis.
Inona no hividy any Chili? fahatsiarovana
Chile dia firenena manan-karena amin'ny kolontsaina mahatalanjona. Ny mpizahatany tsirairay dia afaka manala ny ampahany aminy amin'ny endrika fahatsiarovana Shiliana tokana. Azonao atao aza ny mandray ampahany ara-bakiteny amin'ny tany Shiliana, satria ny iray amin'ireo karazana fahatsiarovana malaza indrindra eto dia ny seramika, ny akora misy ny tanimanga Atacama. Fahatsiarovana mahatalanjona iray hafa dia ny sarontava fombafomba an'ny olona "it", izay nonina Tierra del Fuego taloha. Nampiasa sarontava hazo mamirapiratra ireo olona ireo ho an'ireo fombafomba fiterahana. Tsara homarihina ihany koa ireo vokatra volon'ondry avo lenta atolotra amin'ny bazaar sy fivarotana fahatsiarovana. Ho an'ny famokarana azy, volon'ondry sy alika no ampiasaina matetika.
Sakafo nasionaly ao Shily
Ny vokatra lehibe amin'ny sakafo Shiliana dia ny ovy, ny vary, ny legioma, ny mofo, ny hena. Ny lovia malaza indrindra any Silia:
Pastel de Choclos dia casserole katsaka izay azo afangaro amin'ny henan'omby, voaloboka, tongolo, atody ary oliva.
Empanada de pino - pie misy henan'omby, voaloboka, tongolo, atody, oliva ho famenoana.
Empanada de queso - fromazy ao anaty koba.
Casuela de Vacuo dia lasopy vita amin'ny henan'omby, vary, ovy ary voatavo.
Voaloboka i Porotos granados, voaravaka tsaramaso vaovao, katsaka, zucchini, tongolo ary basilà.
Lomo o lo pobre - steak miaraka amin'ny ovy nendasina sy atody nendasina.
Any Chile, maro ny voankazo sy ny voaroy (paoma, paiso, volom-boasary, voaloham-boaloboka, frezy, sakana, raspberry) no amidy sy lanin'ny vidiny mahaliana.
Eto amin'ity firenena ity koa, misy divay tena tsara vita, aondrana amin'ny firenena rehetra manerantany. Ny divay shiliana malaza indrindra dia Cabernet Sauvignon sy Casablanca.
Amin'ireo fanahy, pisco, marika vita amin'ny voaloboka, dia tokony hojerena. Izy io dia ampiasaina amin'ny famokarana cocktails maro, indrindra ny Pisco Sour (vita amin'ny pisco, siramamy ary ranom-boasarimakirana), Mango Sour (vita amin'ny pisco sy ranom-boaloboka) ary Piscola (vita amin'ny pisco sy Coca-Cola).
Ny endrika governemanta dia repoblika filoham-pirenena.
Vola - Peso Shiliana (CLP)
Renivohitra - Santiago